Dzimwe Dzimwe Nzira dzeKuchenesa kweKugadziridza Audio | Linux Vakapindwa muropa
Dzimwe nzira dzeku Audacity yekugadzirisa odhiyo
Nhasi takapindura iwo matsva Audacity zvakavanzika marongero, iyo inonyanyo kuzivikanwa odhiyo faira yekugadzirisa chishandiso mune yemahara software yenyika. Nhasi tichaenda kunonyora dzimwe nzira dzisingasanganise chero mhando yekutevera kwedata.
Kujekesa kunofanira kuitwa. Iko kungori ikozvino yepamutemo bhanari yeLinux (MuAppImage fomati) Ese maviri FlatPak uye Snap mapakeji pamwe neaya akaisirwa nevanozvarwa mapakeji maneja akagadzirwa kubva kunobva kodhi Uye, sezvingabvira, iyo telemetry sarudzo haina kuiswa mune yekuvaka.
Uye, zvakadaro, hurukuro yeforogo yatotanga.
1 Dzimwe nzira dzeku Audacity
2 Zvimwe zvingasarudzwa
2.5 Gtk Wave Cleaner
Dzimwe nzira dzeku Audacity
Kubva pakushaiwa kwangu ruzivo nezvehunyanzvi odhiyo edhisheni software, Ardor inoita kunge yakazara zvakakwana kupfuura Audacity. Ndiwo mhedzisiro yebasa rekushandira revaimbi, mainjiniya enzwi uye mapurogiramu. Unogona kushanda nemafaira odhiyo ne MIDI, ese ari maviri akachengetwa pane rakaomarara diski uye munguva chaiyo.
Iyo ine multitrack rutsigiro uye plugins mu AudioUnit, LV2, LinuxVST uye LADSPA mafomati.
Pamusoro pekukwanisa kurekodha uye kugadzirisa odhiyo mafaera, zvinokutendera kuti ushande nemavhidhiyo maturu nekuasanganisa iwo akasiyana odhiyo mafaera.
Ardor iri mune zvinyorwa zvekutanga zvekuparadzirwa kweLinux uye ine shanduro dzeWindows, Mac uye Flatpak.
Qtractor ndiye an Audio / MIDI multitrack sequencer application Yakanyorwa muC ++ neiyo Qt fomati, iyo inorema kusimudza inovharwa neJack Audio Kubatanidza Kit yekuteerera, uye iyo Advanced Linux Sound Architecture (ALSA) ye MIDI.
Iyi purogiramu inosanganisira akati wandei sarudzo dzakasarudzika dzekushanda nemafaira odhiyo.
qtractor iri mune zvinyorwa zveLinux chete. Iyo kodhi kodhi inogona zvakare kutorwa pasi.
kwave mupepeti wezwi yakavakwa paKDE Zvimiro 5
Mabasa ayo anosanganisira rekodhi, kutamba, kupinza uye kugadzirisa akawanda marudzi emafaira odhiyo, kusanganisira multichannel mafaera.
Kwave inosanganisira mamwe ma plugins ekushandura mafaera odhiyo munzira dzakasiyana siyana uye inopa grafiki kuona ine yakazara zoom uye pani kugona.
Inowanikwa mune zvinyorwa uye mune Snap fomati
Ngatitarisei izvozvi dzimwe nzira dze Audacity idzo dzinoitsiva.
Mixxx inosanganisa maturusi maDJ anoda ekugadzira kusanganisa rarama nemadhijitari emimhanzi mafaira. Zvimwe zvinhu zvinosanganisira tenzi sync chishandiso kuenzanisa iyo tempo uye mabhawa enziyo ina yekusanganiswa kwakakwana.
Uye zvakare, akawanda mhedzisiro anogona kuverengerwa.
Inowanikwa mune zvinyorwa zvekupa kukuru, zvakare mushanduro dzeWindows neMac.Inowanikwa muFlatpak fomati.
Chishandiso chekuberekesa mhedzisiro mune chaiyo nguva. Inowanikwa chete kune Linux muSnap, Source, Deb, uye RPM fomati. Zvakare zveMac.
Inogona kudzorwa kubva kune mbozhanhare uchishandisa Anwendung.
Es graphical interface yakagadzirirwa KDE desktop iyo inoshanda nemhando dzakasiyana-siyana dzekushandura maturusi. Iyo ine rutsigiro rwekuwedzera-ons uye pakati pehunhu hwayo pane:
Shanduko pakati pemafomati odhiyo.
CD kubvarura kusanganisira multitrack mune imwechete faira.
Kunyora nekuverenga zvinyorwa.
Encoding mu ogg, mp3, mp2, m4a, aac, mpc, flac, ape, ra, ac3, au, shn, tta, bonk, ofr, ofs, wv, la, pac, spx, wav mafomu eWPL
Kugadziridza mu ogg, mp3, mp2, m4a / mp4, aac, 3gp, mpc / mp +, flac, ape, wma, asf / asx, ra, rv, rm, avi, mpeg, wmv, qt / mov, flv, ac3 mafomati, au / snd, shn, tta, bonk, ofr, ofs, wv, la, pac, spx, pakati, iyo, wav WPL
Iwe unogona kuiwana mune zvinyorwa zvekusiyana kwakasiyana kweLinux.
mhWaveEdit isoftware yekutamba, kugadzirisa uye kurekodha mafaera ezwi. Kunze kwe .wav mafaera anoshanda nemamwe mafomati. Iyo inogona kugadzirisa ese makuru uye madiki mafaera, uye ine rutsigiro rwe8/16/24/32 bit yakasainwa uye isina kusainwa fomati fomati.
Inowanikwa mune zvinyorwa zvekusiyana kwakasiyana.
Gtk Wave Cleaner
Iri svondo yakanaka kana iwe uchida kuchenesa ruzha mafaera ekuteerera. Kushandiswa kwaro kunoitirwa kutamba vinyl zvinyorwa mune dhijitari fomati. Inowanikwa mune zvinyorwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Dzimwe nzira dzeku Audacity yekugadzirisa odhiyo
Ndinokurudzira Ocenaudio (https://www.ocenaudio.com/), Ndanga ndichiishandisa kwenguva yakareba uye yakanaka. Audacity haina kumbobvira yashanda yakagadzikana kwandiri, uye chokwadi hachioneke kusagadzikana kwandiri.
iyo post yakaipa
Ardor ine yakanyanya yakakwira yekudzidzira curve pane kungwarira uye yakagadzirirwa zvimwe zvinhu
Odhiyo yeOcean ndiyo imwe nzira, (kana ukasashandisa Pipewire)
asi chokwadi, zviri nyore. yakachena, yakasununguka seAudacity yezvakajairika post mabasa, hapana
Pamwe yakanakisa imwe nzira ndeye Reaper
Yggdrasil yakavanzika uye yakasarudzika IPv6 network kuitiswa
Ndeipi data Audacity inounganidza uye zvayinoti inoshandisa iyo